OnePlus 3 Review - Rule News
casriga ah Previous OnePlus ku sheegtay inuu yahay "dilaayada flagship". Taasi weli ma arrin sax ah, laakiin OnePlus ah 3 waxaa smartphone aad u wanaagsan jaban ee ka yar kala bar qiimihii ay xafiiltamaan ee ugu sareeya.
jirka aluminium Premium, screen wanaagsan iyo camera, scanner faraha weyn, software bloat-free, iyo batari maalin - at qiimaha Samsung qeybtii
Maqaalkaan oo cinwaankeedu ahaa “OnePlus 3 dib u eegis: phone flagship ee bartamihii kala duwan oo qiimaha” waxaa qoray Samuel Gibbs, waayo theguardian.com on Tuesday 14 June 2016 17.00 UTC
OnePlus The 3 waxaa smartphone ugu dambeeyay-dhamaadka sare iibin at qiimaha bartamihii kala duwan-ka saaraha Chinese OnePlus, oo waxay bixisaa waayo-aragnimo ah la safeeyey, waayo, la taaban karo ka yar Samsung, HTC, LG ama Apple.
The 3 waa smartphone afaraad ka OnePlus - xawaaladaha yar Chinese dooneysa in ay bixiyaan wax soo saarka ugu fiican ee waayo-aragnimo suuragal ah in lacag si weyn u wax ka yar xafiiltamaan - waana talaabo weyn in jiho kasta in ka badan OnePlus ee sannadkii hore 2.
top Aluminium si hoose
badhamada capacitive labada dhinac ee button guriga lagu kala baxday karaa dhinac, waa in aad rabto in aad button dib on xaq u. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
OnePlus The 3 waa phone dhan-bir ah oo leh wax yar ka dib geesba, geesaha macaan oo hore galaas contoured in tapers off dhinaca geesaha. Waxaa dareemeysaa in aad si fiican u wada saaray, run ahaantii weyn ee gacanta iyo sida ugu fiican ee ugu fiican kooxda sare-hoodu.
The shaashadda HD full 5.5in waa firfircoon, la kiiyoo inky, midabada hodan iyo caddaanka wanaag cad. Ma aha sida xalinta sare, oo sidaas daraaddeed ma aha sida pixel-cufan sida Samsung Galaxy S7 Edge, Si kastaba ha ahaatee, taas oo dhinac-ilaa-dhinac dareemi. Waxaa sidoo kale ma ahan weyn ay u isticmaalaan in la gashto dalwaddii-xaqiiqda, laakiin iibsada ugu faraxsanaan doonaan tayada ee shaashadda.
bandhigay ayaa sidoo kale waxa uu leeyahay bezels aad u cidhiidhi ah labada dhinac, taas oo ka dhigaysa OnePlus ah 3 arrin cidhiidhi waayo smartphone a badan-baarey, oo la maarayn badan sababtoo ah tirada guud ee qalabka waa la hayaa arrin yar. Marka la barbar dhigo smartphone ugu fiican 5.5in heli karaa, ka Samsung Galaxy S7 Edge ay shaashadda qalooca, OnePlus ah 3 waa 2.1mm kaliya ballaaran. Sidoo kale 1.8mm kaliya inaga badan Samsung.
slider Ogeysiinta waa weyn. Google waa qayb caadi ah ee telefoonka ah Android dhigi. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
Mid ka mid ah waxyaalaha u gaarka ah si ay u OnePlus waa slider wargelin dhinaca telefoonka in badalato dhexeeya aamusan a, mudnaanta iyo farriimaha oo dhan. Waa wax weyn oo phone kasta oo Android waa in ay leeyihiin mid ka mid ah.
Processor: Bawdada-core Qualcomm Snapdragon 820
Nidaamka Operating: Android 6.0.1 OxygenOS
Camera: 16Xildhibaan gadaal camera la OI, 8Xildhibaan camera hore jeeda
Top Creech waa ku dhawaad-dhaaf
taageero Sim Dual waa caadi ahayn ee UK, gaar ahaan smartphone ugu sareeya ee Creech a. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
OnePlus The 3 waddaa-dhamaadka sare chip ugu dambeeyay Qualcomm ee smartphone, Snapdragon ah 820, oo dardaaran u badan tahay awooda ugu badan ee casriga ah flagship ah inta ka dhiman 2016. Waa jab quruxsan awood ah in ay la tacaalaan doonaa wax kasta qof ay u badan tahay in ay isku dayaan in ay sameeyaan la smartphone a.
Mid ka mid ah wax in uu sharxayaa OnePlus ah 3 ka pack la'aantiis waa ay 6GB ee RAM. casriga ah badankood waxay leeyihiin 2 ama 3GB, iyadoo qaar ka mid ah sida 4GB ee Galaxy S7 Edge isagoo. RAM The dheeraad ah taleefan u leeyahay Chine badan oo tabs in browser ay yeelan karaan furan waqti isku mid ah, laakiin daacad ah 6GB waa dhaaf yara wixii macquul xilligan a. Raadinta at monitor xasuusta dhisay Android ah, of 5.6GB ee RAM heli karaa, Waxaan si dirqi ah sii isticmaali badan 3.5GB. Sida kombiyuutarada, Si kastaba ha ahaatee, aad kaliya u baahan xusuusta ka badan sida horumarka wax, si aad u eegi kartaa waxa at sida mustaqbalka awdidu.
OnePlus The 3 ahaa uu faham iyo sidoo sameeyaa aan imtixaanka oo dhan, yar jidka Artur dareemi ama shig-shigid meel kasta. Waxaa xitaa qaban fadhiyada ciyaaraha 30-daqiiqo oo aan qaadan aad u kulul maalin marka heerkulka daarmayaay'e dhacay 25c.
Loo isticmaalaa sidii aalad hoose aan afar saacadood ee dhegaysiga muusikada dhex headphones Bluetooth, saddex saacadood qaatay dhirta ama isticmaalaya barnaamijyadooda, ciyaaraha marmar iyo sawiro qaadashada, boqolaal farriimaha riix maalintii oo dhan, OnePlus ah 3 socday ka badan 24 saacadaha u dhexeeya eedeeyay.
Waxaan ogaaday nolosha batteriga in inta lagu jiro maalinta ahayd arrin wanaagsan – on par leh qaar ka mid ah awood dheeraad ah casriga hufan – laakiin markii in heegan habeen ahayd mid liidata, badiyay dhexeeya 12 iyo 16% la'aan halka harsan aamusan on miiska sariirta a toddoba saacadood. Qalabka intooda badan agagaarka lumin 1% la'aan saacaddii.
Dash Charge muuqataa oo ka shaqeeya sidii xal xukun degdeg ah wax kale, laakiin telefoonka ma heli kulul oo aad u isticmaali kartaa iyadoo eedeeyo iyo weli waa hogaanka ilaa heerka ugu. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
walaashay OnePlus ayaa shati smartphone Chinese sameeyo technology xukun degdeg ah Oppo ee, taas oo ka duwan inta badan xal kale xukun deg deg ah oo ay u dhaqaaqin ee chips degdeg ah ku amraya in ay adabtarada awood u shaqeeya, halkii ay telefoonka. nidaamka Charge Dash The dhaqdhaqaaqa isha ugu weyn ee kulaylka inta lagu jiro amraya ka xidha hawadu ee telefoonka dhow batteriga si wax shidan derbiga galay, taasoo la micno ah telefoonka qaadi karaan si degdeg ah oo aan aad isagoo walwalo u kululaado.
Faaiidaysta ka eber in 100% qaaday 72 daqiiqo, halka eber in 75% qaaday 36 daqiiqo. Taasi ma ka dhaqso badan oo ka badan sida ugu fiican ee intiisa kale marka aan la isticmaalayn. Farqiga u yahay in telefoonka ma kululeeyo ilaa at dhan, oo loo isticmaali karo sida caadiga ah aan saamayn heerka amraya. Qalabka intooda badan ka heli aad u kulul oo waa in hoos u dhigi xawaaraha xukun, gaar ahaan marka qof la isticmaalayo qalab la shaashadda on.
Dhinaca kale waa in haddii aad ka qaadaan OnePlus ah 3 via ahayn Dash-la'aan adapters awood socon, sida computer ah, eedeeyay telefoonka ee gaabis ah, heerka caadiga ah. saxan Dash kharash kasta oo £ 16 – sidaas darteed waa qiimo kale iibsashada la telefoonka.
OnePlus The 3 Sidoo kale waa a-dual Sim phone, taas oo ah mid dhif ah ee UK, aad la micno karaa leedahay laba qorshe oo kala duwan, shabakadaha iyo lambarrada telefoonka xidhiidhinaya mid phone – faa'iido badan ee aad qaadato taleefoonka shaqada iyo telefoonka gaarka ah qalab ka mid ah, tusaale ahaan.
weli Better, waa taageeri karaan laba kaararka Sim in heegan isku mar, taas oo macnaheedu yahay labada kaararka la xiran karo in a network 4G / 3G waqti isku mid ah. Inta badan taageero hal kaadh oo keliya in hab 2G, shabakadaha discounting sida UK ee Three, oo ha isticmaalin signal 2G ah.
OxygenOS, haddii aadan jeclaan
OxygenOS waa wanaagsan yahay,, laakiin bootloader furan waxay ka dhigan tahay, waad bedeli kartaa version kale ee Android haddii aad rabto. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
OnePlus saarta version caadadii of Android lagu magacaabo OxygenOS. version ugu dambeeyay ku salaysan yahay Android 6.0.1 Marshmallow iyo wajiga waxaa ka mid ah muuqataa ka version ee Android ordaya on no kala duwan casriga ah Nexus Google.
OxygenOS ayaa Launcher wax yar oo kala duwan leh shirkadda lagu magacaabo Mudada on Murayaad bidix ugu homescreen ah – meel gelinaya widgets, Apps walxood iyo cimilada. Users sidoo kale yeelan karaan badhamada ku-screen navigation, ama isticmaalaya kuwa xiriiri capacitive hoose shaashadda si loo badbaadiyo meel bannaan iyo sidoo kale astaysto waxa ay samaynayaan,.
Mudada uu ku saabsan yahay farqiga u dhaxeeya kaliya version Nexus Android Google. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
Tusaale ahaan, Waxaan dhigay tuubada a double oo ka mid ah barnaamijyadooda button dhawaan loo isticmaalaa in lagu biiro degdeg ah app la soo dhaafay used – feature in uu lagu daray version xiga ee Android N. doorashada A of baaqyada kale, sidoo kale ah hab bandhigay daarmayaay'e in tooso shaashadda marka farriimaha ku iman ama isticmaala kamarad in la ogaado marka aad gacanta ka sarreeya shaashadda si toos, sidoo kale waxaa laga heli karaa.
OxygenOS waa mid ka mid ah si fiican u, dib u furteen iyo versions bloat-free of Android.
OnePlus The 3 scanner faraha waa mid ka mid ah dareemayaal style guriga-button fiican la heli karo. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
Shaqooyinka button guriga sida scanner faraha a, taas oo si dhakhso ah oo ajiibaa. Inta badan waxa ay aqoonsan lahaa markii ugu horeysay suulka, laakiin mararka qaarkood ku dhibtoon lahaa markii aan suulka ma aysan aheyn dabooli shidma oo dhan at xaglo cajiib ah.
Waxaa si weyn u soo hagaagtay ka badan OnePlus 2, oo kaliya wax yar ka xun ka aad u fiican ka Huawei.
app camera OnePlus wuxuu isku dayaa inuu sameeyo waxa adag in la qaato sawir xun oo ku guulaysto qaybta ugu. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
The camera 16-megapixel weyn ee dhabarka waa awood qaar darbo fiican guud ahaan xaaladaha nalalka kala duwan. Iyada oo iftiin fiican camera ka soo saara sawiro faahfaahsan oo midabyo cadaalad lifelike aan dhibaato badan. In xaaladaha iftiiminta adag, sida kuwa hoos iftiinka aan dabiici ahayn, images ka eegi kartaa ku taalay yara ee dalagga buuxda.
Ma ahan arrin camera ugu wanaagsan ee la heli karo, laakiin weli halkaas kula casriga ah sida oo kale aad ujecel qeybtii.
app camera waa fudud si ay u isticmaalaan si aad u hesho sawirada wanaagsan, oo uu leeyahay gacanta ku Buuggan buuxa la taageero cayriin haddii ay sidaa tahay la doonayo. mooshin gaabis video 720p at 120fps sidoo kale waa la heli karaa, la 4K duubo at 30fps haddii loo baahdo.
The camera sawir 8-megapixel on hore ee soo saarta qaar ka mid ah selfies ugu faahfaahsan Waxaan arkay, xataa xaaladaha hillaac yara adag.
aluminium The cirro ayaa towns a yar oo cas, waxa uu in nalalka gaar ah
The bezels yar u sahlay in ay qabtaan, laakiin waxaan ogaaday in ay dhib yartahay in ay dhaqaajiso badhamada navigation capacitive la calaacasha
Aamusinta telefoonka kula slider ogaysiinta waa wax fudud oo degdeg ah
Chargers Dash awood qalab kale ilaa 2A, taas oo ah heerka xukun caadiga ah
OnePlus iibiya xeedho baabuurta Dash ah 25 £
Waxaa la helay NFC, oo OnePlus ah 2 dilalka aan sameeyey – wanaagsan ee Android Pay
Maraakiibta phone la bootloader ah xidhin taas oo kuu sahlaysa in ay ku shuban versions caadadii Android, waa in aan aad jeceshahay OxygenOS
Waxaa la iman gargaare shaashad hore lagu rakibay-, laakiin sida ugu sokeeye screen on galaas contoured ama qalooca, taagan sida suulka xanuun.
aluminium The qalooca dhabarka dareensan weyn ee gacanta iyo belays ay £ 309 qiimaha. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
OnePlus The 3 Kharashka £ 309 ($399) heli karaa markaas cirradayda midabka dahabka ah la heli karo ka dib. phone ayaa laga heli doonaa si toos ah ka OnePlus aan nidaamka yeedhi muran shirkadda.
Wixii la barbardhigo, 5.5in ah Samsung Galaxy S7 Edge Kharashka £ 639, ka Google Nexus 6p Kharashka £ 449 iyo Huawei P9 Plus Kharashka £ 500.
Waayo, £ 309 oo aad ka heli qurux a, smartphone biraha si fiican u-dhigay, nolosha batteriga macquul ah, screen wanaagsan iyo kamaradaha, iyo waxqabadka uu faham. Waxa kale oo aad ka heli-dual Sim taageero iyo 64GB of kaydinta dhisay. Waxaa si fudud OnePlus ugu wanaagsan ee smartphone ayaa.
Cabashada ugu weyn ee casriga ah OnePlus hore ahayd sida ay u adag, waxay ahaayeen kuwa si dhab iibsan, taas oo waa in aan mar dambe u noqon kiiska, halka shirkadda ka soo shaqeeyay adag tahay in la hagaajiyo fursadaha taageero.
Weli waxaa su'aal ah ka gaartay xawaaraha of updates software, laakiin smartphone a top Creech qiimo bartamihii kala duwan-a, aadan helin aad uga wanaagsan OnePlus ah 3.
Arrrimaha: ma batari saari, ma kaydinta fideysa, xukun gaabis ka adapters awood la'aan non-Dash, dhigsan hooseeyo screen for VR
dib u eegis Huawei P9: gaarno wiilasha weyn laakiin maqan oo kaliya on software
Honor 5x dib u eegista - badan oo telefoonka lacag, dejisay by software saboolka ah
dib u eegis Google Nexus 6p: mid ka mid ah phablets fiican la heli karo
OnePlus 2 dib u eegis: a 'dilaaga flagship' dhab ah?
OnePlus dib u eegis X: smartphone cut-qiimaha u eg, waxaana uu dareensan premium
dib u eegis iPhone 6S Plus: oo kali ah ka khayr badan iPhone 6 More
Android, Qodobka, Telefoonada Mobile, Dib u eegida, Samuel Gibbs, Telefonada casriga ah, Technology, UK Technology
← Huawei P9 Plus Review Kansarka Naasaha Growth Cell hakiyey by Osteoporosis Drug →